Miisaanka Turkiga Oo La Ogaaday Iyo Suuqyada Eeshiya Oo Hoos U Dhacay | Hangool News
Miisaanka Turkiga Oo La Ogaaday Iyo Suuqyada Eeshiya Oo Hoos U Dhacay
August 16, 2018 - Written by Hangool News 1
Hangoolnews:- Suuqyada Eeshiya ayaa waxa laga dareemay hoos u dhac weyn kadib markii ay liicday lacagta Liirada ee waddanka Turkiga taasi oo meel hoose gaadhay waxaana dalalka Eeshiya ay tilmaameen in Turkigu yahay mid laf dhabar u ah dhaqaalaha waddamada Eeshiya iyo Yurub.
Suuqyada waaweyn ee dalalka South Kore,Japan,Australia iyo Shiinaha ayaa laga dareemay saameyn xooggan iyada oo markii dambe saameyntaasi ay gaadhay suuqa weyn ee Wall Street ee Maraykanka kaasi oo Dollarkii liicay.
Suuqa weyn ee dalka Japan ayaa waxa soo foodsaaray hoos u dhac weyn kadib markii ay liicday lacagta Liirada ee Turkiga, waxaana dawladda waddankaasi Japan ay ku dhawaaqday in kor ay u qaadayso taageeridda lacagteeda Yen ka.
Suuqa dalka Australia ayaa isna ruxan weyn laga dareemay iyada oo cabsi xooggani ay soo foodsaartay dadka maalgashadayaasha ah oo sheegay in dhibtu ka timi hoos u dhaca weyn ee ku yimid lacagta Liirada ee dalka Turkiga oo xidhiidh weyni kala dhaxeeyo. Koonfurta Kuuriya ayaa iyaduna waxa ay ku dhawaaqday in hoos u dhac gaadhay boqolkiiba Kow iyo Toban 11% lacagteeda waxaana ay ku dhawaaqeen in taageero xooggan oo deg dega ay la gaadhayaan lacagtooda.
Dawladda dalkaasi Shiinaha ayaa iyadna sheegtay in lacagteeda ay dhibaato soo foodsaartay waxaana ay ku gooddiyeen in ay qaadi doonaan dagaal ka dhan ah lacagta Dollarka haddii Maraykanku uu joojin waayo daan-daansiga dhaqaalaha ee uu dunida ka wado. Dhanka kale dawladda Faransiiska ayaa sheegay in ay xoojinayaan dhaqaalahooda kadib weerarka ka yimid dal xulafada NATO kamid ah oo Kuna socda waddan kale oo NATO ka tirsan.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Pakistan Cimran Khan ayaa isna bartiisa Twitterka ku soo qoray in waddanka Pakistan uu garab taaganyahay waddanka Turkiga iyo Madaxweynahooda Erdogan, waxaana uu sheegay in uu usoo ducaynayo dagaalkana ay guulaysan doonaan.
Waddamadan ayaa waxa ay dhammaan aad u dareemeen hoos u dhac soo gaadhay waxaanay si weyn isu garab istaageen dalka Turkiga maadaama uu muhiim u yahay dhaqaalahooda.
Arrintan ayaa timid kadib markii dawladda Maraykanku ay cunaqabatayno kusoo rogtay dalkaasi Turkiga taasi oo sababtay in lacagta Liirada ee dalka Turkigu ay si weyn hoos ugu dhacday waxaana ay gaadhay Abid halkii ugu hoosaysay tan iyo intii Erdogan uu hoggaaminayay dalkaasi.
Cunaqabataynta Maraykanka ayaa ka dhalatay kadib markii dawladda Turkigu ay xidhay wadaad Kiristaan ah oo u dhashay dalka Maraykanka kaasi oo ay ku eedaysay in uu ku lug lahaa lana shaqaynayay kooxihii isku dayay inay inqilaabaan madaxweynaha Turkiga laba sano ka hor.